Donald Trump oo shaqada ka ceyriyay General Jeff Sessions – Bandhiga
Donald Trump oo shaqada ka ceyriyay General Jeff Sessions
Wasiirka cadaaladda ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa ku dhawaaqay inuu iska ga degay xilka kadib codsi ka yimid madaxweyne Donald Trump,kaasoo ujeediyay dhaleecooyin badan gaar ahaan arrinta ku saabsan baaritaanka farogelinta Russia ee doorashadii madaxtooyada.
Dhinaca kale Trump ayaa ku simaha jagadan magacaabay madaxa waaxda shaqaalaha ee wasaaradda caddaaladda Matthew Whitaker inta laga gaarayo magacaabista wasiir cusub.
Xil ka degistan wasiirkan cadaaladda ayaa loo sababeynayaa arrimo la xiriira dhaleecooyin aad u balaaran oo uu kala kulmayay Donald Trump.
Waxaa xilka ka degsita wasiirka caddaaladda ay kusoo beegmaysaa maalin uu kadib qabsoomida doorashooyinka ee cusboomaysiinta xilliga dhexe ee Congress, halkaas oo Jamhuurigu uu xajistay guusha aqlabiyad Senate ka,halka xisbiga Dimuqraat sidoo kale uu gacanta ku hayo Golaha baarlamanka.
Warbaahinta ayaa sheegtay in aynan hore u dhicin taariikhda Maraykanka ee cusub in madaxwaynaha dalku uu si cad u weeraro xubin kamid ah xukuumadiisa oo ah wasiir Sesseions oo da’diisu ay tahay 71-jir kamid ahaa xubnihii garyaqaanada ahaa ee ugu horeeyay eeu muujiyay taageerada Trump ololihiisii doorashooyonka.